Hello Nepal News » बार्सिलोनालाई रियलका कप्तानको ‘तिखो व्यंग्य’ !
बार्सिलोनालाई रियलका कप्तानको ‘तिखो व्यंग्य’ !
एजेन्सी, पुस १०
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोसले आफ्नो खास प्रतिस्पर्धी क्लब बार्सिलोनाप्रति घोचपेच गरेका छन् । क्रिसमस पर्वको अवसरमा ‘मार्सा’ पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा स्पेनिस डिफेन्डरले बार्सिलोनाले यसपालि के–के उपाधि जित्छ भनेर आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । रामोसलाई ‘बार्सिलोना र रियल मड्रिडले यस सिजन कुन–कुन उपाधि जित्न सक्छन्’ भनेर सोधिएको थियो ।
सो प्रश्नमा रामोसले आफूहरूले च्याम्पियन्स लिगसहित स्पेनमा तीनवटै प्रतियोगिता जित्नका लागि लड्ने बताए । तर, घुमाउरो पारामा रामोसले सबै उपाधि आफूहरूले जित्ने र बार्सिलोनाले जित्ने उपाधिबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘हामी च्याम्पियन्स लिगसहित तीनवटै घरेलु प्रतियोगिता जित्न चाहन्छौं । ला लिगा, कोपा डेल रे र सुपर कप यी तीनवटै उपाधि जित्नु हाम्रो लक्ष्य हो । र, यसपटक हामी यो जितेर देखाउँछौं,’ रामोसले भने ।
बार्सिलोनाले गत सिजनझैं यसपटक पनि स्पेनमा केही जित्न नपाउने आशयमा व्यंग्य गर्दै रामोसले अघि भनेका छन्– ‘रियल मड्रिड तीनवटै उपाधि जित्न चाहन्छ । मलाई थाहा छैन, उनीहरू (बार्सिलोना) ले के–के जित्छन् । (हाँस्दै) मलाई अरूले के–के जित्छन् भनेर नसोध्नुहोस्, रियल मड्रिडले के–के जित्छ भने सोध्नुहोस् ।’
प्रकाशित मिति १० पुष २०७७, शुक्रबार १६:०७